I-China enokuphinda isebenze kwakhona iiphakheji yezingxowa zeefektri kunye nabathengisi | NGOKUPHAKAMILEYO
Iingxowa ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze kwakhona. Ingena endaweni yebhokisi yebhokisi yesiqhelo, kodwa iyabiza kunebhokisi. Nika umphezulu wokuprinta o-5, oku kulungile kukunyuswa kweemarike zehlabathi. Umazantsi uthe tyaba ngokupheleleyo kwaye icala linokutyhilwa, liyenze ilungele ukupakisha iimveliso ezinzima.
Ukulungiselela ukuhlangabezana nobuhlobo bomsebenzisi wabathengi, ibhegi esezantsi esisezantsi / ibhegi yesikwere inokuqhotyoshelwa ngocinezelo, uziphu wesilayidi, ivelufa. Izinto zeMono PE ezinepropathi enomqobo omkhulu, Zilukhetho oluhle kakhulu lwephakeji efana neprotein powder, ukutya kwezilwanyana zasekhaya, imbotyi yekofu kunye nenut.
Iingxowa ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze kwakhona, Imilo yebhokisi, yenze ukuba ithwale imiqulu emininzi ngelixa ishiya umthengi enomdla obonakalayo. Ezi pakethi zigcina i-30% yezinto ezibonakalayo kunesikhwama sokuma, kodwa ubambe imiqulu emininzi. Unokongeza ukufakela okongezelelekileyo kwisingxobo esisezantsi esisezantsi, njengevalve, itayi, ukuxhoma umngxunya. Ingxowa ephantsi ehlaziyiweyo ye-EPP ishiya unyawo oluncinci kwaye inikezela isithintelo esiphezulu ukugcina iimpahla zintsha.
Egqithileyo Ukuphinda usebenze kwakhona ii-Pouch Patch
Okulandelayo: IiMeyili ezinokuphinda zisebenze